intshayelelo emfutshane of EPA - Nantong ant Machinery Co., Ltd
intshayelelo emfutshane of EPA
the United States Environmental Protection Agency (EPA okanye ngamanye amaxesha USEPA) i-arhente le U.S. urhulumente federal leyo wadalwa ngenjongo yokukhusela impilo yabantu kunye nokusingqongileyo zokubhala ukunyanzelisa imithetho esekelwe kwimithetho kudlula Congress. I-EPA yaphakanyiswa nguMongameli Richard Nixon waza waqalisa ukusebenza ngo December 2, 1970, emva Nixon asayina umyalo.
I-EPA uye ikomkhulu yayo e Washington, D.C., ofisi zommandla ngamnye kwimimandla elishumi arhente \_ 's, yaye 27 iilebhu. I-arhente uqhuba uvavanyo lokusingqongileyo, uphando, kunye nemfundo. Unomsebenzi yokugcina kwaye nokunyanzelisa imigangatho yesizwe phantsi ezahlukeneyo imithetho yendalo, ngokubonisana ne karhulumente, tribal, noorhulumente basekhaya. Kuyo kwakukho iindwendwe ezimalunga nama zokuvumela, esweni, kunye nokunyanzeliswa uxanduva U.S. lithi kunye nezizwe Native American. amagunya zokunyanzelisa EPA lemali, lweMelika, namanye amanyathelo. I-arhente kwakhona isebenza kunye namashishini kunye onke amanqanaba karhulumente kwiimeko ezininzi ezibanzi iinkqubo zothintelo longcoliseko ngokuzithandela kwaye iinzame zolondolozo amandla.
I-arhente malunga 17,000 abasebenzi abasisigxina. kwaye esebenzisa abantu abaninzi ngakumbi qho zezivumelwano. Ngaphezu kwesiqingatha EPA human resources ezi iinjineli, zesayensi, kunye neengcali ukhuselo lokusingqongileyo; namanye amaqela ziquka zomthetho, kwimicimbi yoluntu, zemali, kunye noochwephetsha ulwazi.
Edlulileyo: intshayelelo emfutshane Air-cleaner
Okulandelayo: Technical Core of Rammer